झिलिमिली बत्तीले धपक्कै बल्यो काठमाडौँ (फोटोफिचर), Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
झिलिमिली बत्तीले धपक्कै बल्यो काठमाडौँ (फोटोफिचर)
आर्यन धिमाल , २१ कार्तिक २०७५
काठमाडौँ। हिन्दुहरुको दोस्रो ठूलो चाड तिहारको आज तेस्रो दिन घरघरमा ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआजा गरी मनाइएको छ। तिहारलाई उज्यालोको पर्व समेत भनिन्छ।
विशेष गरेर लक्ष्मी पूजाकै दिनदेखि नेपालीहरु आफ्नो घर, अफिसहरुलाई सफा गरी विभिन्न झिलिमिली बत्तीले सजाउने गर्छन्।
प्रत्येक वर्ष तिहारको समय झिलिमिली बत्तीका कारण काठमाडौँ उपत्यकाको छुट्टै दृश्य देख्न सकिन्छ। जसले हरेकलाई धपक्क बलेको काठमाडौँको दृश्यले मोहित बनाउँछ।
मुख्यगरी तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मी पूजा सकेपछि घरहरु बत्तीले सजाइने गरिन्छ। आजको दिन काठमाडौँको मोहित बनाउने दृश्य हेर्न मानिसहरु आफूलाई पायक पर्ने स्थानम भेला हुने गर्दछन्।
विशेष गरेर काठमाडौँको स्वयम्भूनाथस्थित हलचोक माथि रहेको सिङ्गल ट्री भन्ने स्थानबाट काठमाडौँ उपत्यकाको पुरै दृश्वालोकन गर्न सकिने हुँदा उक्त स्थानमा प्रत्येक वर्ष युवायुवतीहरुको घुँइचो नै लाग्ने गर्छ। हेरौं डिसीनेपालका फोटोपत्रका आर्यन धिमालले खिचेका काठमाडौँ उपत्यकाको केही मनोरम दृश्यः–